व्यवसायमा जम्दै २३ बर्षे युवा - GBM
२०७९ असार ८ gautam buddha sandesh	0 Comments
तपाई धेरैलाई पहिलो पटक जागिर गर्दा रोजगारदाताले सोधेको पहिलो प्रश्न अनुभवको बारेमा सोधिएको थियो होला । अधिकांश प्राइभेट जागिर गर्दा तपाईको शैक्षिक योग्यता सँगै कामको अनुभव कति छ भनेर सोध्ने गरिन्छ । धेरैजसो आवश्यकता सम्बन्धि विज्ञापनहरुमा अनुभवीलाई विशेष ग्राहयता दिइनेछ भनेर लेखिएको पक्कै पनि देख्नुभएकै होला । अनुभवी कर्मचारीको खोजी हुुनु स्वभाविक हो ।
नेपालमा विभिन्न किसिमका रोजगारीका अवसरहरु पनि छन् । विकास निर्माण देखि व्यवसायिक प्रतिष्ठान र सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरुमा जनशक्तिहरुको माग बढ्दो रुपमा रहेको छ । साना र मझौला उद्योगहरुको स्थापना सँगै जनशक्तीको मागपनि बढदे छ ।
पछिल्लो समय युवाहरु रोजगारीमा भन्दा आफ्नै व्यवसायमा आकर्षण बढ्दो देखिन्छ । यसैका एक उदाहरण हुन् सुन्दर के.सी. ।
के.सी. स्याङ्जा जिल्लाको विरुवा गाउँपालिका वडा नं. –६ चिन्नेवास निवासी बावु सोम बहादुर के.सी, आमा गिता के.सीको कोख बाट २०५५ साल असोज ४ गतेका दिन कान्छो सन्तानको रुपमा जन्म लिएका हुन् । कक्षा १ देखि एस.एल.सी. सम्मको अध्ययन गाउँमा रहेको श्री जनपृय उ.मा.वि मा गरी २०७१ सालदेखि भैरहवामा रहेको भैरहवा उ.मा.वि.मा प्लस टु मा भर्ना भए । उनि संग सुरुमा हातमा सिप पनि केहि थिएन । हुनत र्भखरै एस.एल.सी. गरेका उनि सिप पनि कसरी होस् ? जागिर गर्न पनि काम जनेको हुनुपर्ने यसै कारणले काम खोज्दै जाँदा मुस्किलले उनले टुर्स एण्ड ट्राभल्समा महिनाको ६ हजारको तलवमा कार्यालय सहयोगिको रुपमा जागिर पाए ।
पढ्दै जागिर गर्न थाले । क्लास हापेर काममा जानु पर्ने र कम तलब भएका कारण पढाई खर्च पु¥याउन पनि मुस्किल हुने भएपछि ९ महिना पछि त्यो जागिर पनि छोडे र फेरी आर्को काम सुरु गरे । त्यो पनि कम तलब भएका कारण छोडे । त्यसपछि भैरहवामा रहेको फोर्स मोटर्समा पाट्स इन्चार्ज भएर काम गरे । त्यो काम पनि छोडेर ६ महिना कामनै नगरी घरमा बसे । २०७२ सालमा प्लस टु सकेर बि.बि.एस अध्ययनको लागि भैरहवा बहुमुखि क्याम्पसमा भर्ना भए । राजनीति क्षेत्रमा पनि रुचि राख्ने उनी २०७४ सालमा अनेरास्ववियुको क्याम्पस कमिटि उपाध्यक्ष भएर काम गरे । त्यसपछि उनले जागिरले नहुने भएपछि आफुले नै केही गर्नुपर्छ भनेर आवारोडमा सानो मःम पसल सञ्चालन गरे ।
व्यवसाय बढ्दै गयो । ठाउँ सानो भएको कारण आर्को ठाउँमा के.सी चिकन कर्नरको नाम बाट आवारोडमा फास्टफूड व्यबसाय सञ्चालन गरे । उनले भैरहवामै केही नयाँ कुरा पनि ल्याउनु पर्छ भन्ने सोचका साथ व्यवसाय ठुलो बनाए । अहिले ८ जनाले रोजगारी पाएकोे के.सी.को भनाई छ ।
उनले भने म संगै पढेका धेरै साथिहरु विदेश पनि गए । मलाई विदेश जाउ पनि भने मैले अठोट गरे नेपालमै केही गर्छु भन्ने भावना जाग्यो । घरपरिवारमा आमाको सपना एउटा छोरा आर्मि बनोस भन्ने थियो । मैले अर्काको गुलाम नबन्ने भनेर अठोट गरे । अहिले आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गरेको छु । घरपरिवारको साथ सहयोग पनि मिलेको छ उनले सुनाए ।
सानैदेखि नै आफैले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढेका के.सी अहिले २३ वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा होटल व्यवसायी समेत बनेका छन् । सानै उमेरदेखि घरमा खाना बनाउने र कुकिङ्गको सोखिन भएका कारण पनि यो व्यवसाय रोजेको उनि बताउछन् ।
प्रख्यात हैदरवादी दम बिरयानीको स्वाद अव भैरहवामै लिन पाइने पनि उनले बताए । भैरहवाको नारायणपथमा अवस्थीत के.सी. चिकन कर्नरले विरयानीका पारखीहरुको लागि न्युन शुल्कमा यो सेवा सुरु गरेको उनको भनाई छ । जसमा अव ग्राहकरुले रु. ९९ मै यसको स्वाद लिन सक्ने प्रोपाइटर के.सी.ले बताए । सामान्यतया विरयानीको मूल्य बजारमा ३ सय देखी सुरु हुने भएतापनि न्यून आय भएकाहरुका लागि मध्यनजर गरी आफुले न्यून शुल्कमै यसको स्वाद चखाउन सुरु गरेको उनले बताए । विद्यार्थी र कम आय भएकाहरुलाई मध्यनजर गरी यो सेवा सुरु गरेको र खाजाको लागि सिमित बजेट भएको अवस्थामा यो बिरयानीलाई १ दिनको खाना÷खाजाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भएकोले ग्राहकहरुबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको उनी बताउँदछन् ।
यो परिकार नाफामूखी भन्दा पनि सेवामूखी रहेको प्रोपाइटर के.सी. बताउँदछन् । उनले भैरहवाबासीलाई नयाँ स्वाद चखाउनकै लागि यो परिकार सुरु गरेको र यसबाट आफुलाई नाफा कमाउन भन्दा पनि ग्राहकहरुलाई सन्तुष्ट बनाउनु मुख्य उदेश्य रहेको उनले बताए ।
विगत ३ बर्षदेखी भैरहवामा स्थापीत यस व्यवसायिक प्रतिष्ठानबाट ग्राहकहरुले विभिन्न फाष्टफुडको स्वाद लिदै आएका छन् । भैरहवा क्षेत्र भित्र फ्री होम डेलिभरीको समेत सुविधा दिएको के.सी.ले बताए ।
← बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा देखिएकोे गैडा ।
नेता पाैडेलकाे आराेप : सरकारले आयल निगमलाई पनि व्यापारीकाे हातमा दिने तयारी गरिरहेकाे छ →
संगीतले जिते उपाधि
२०७५ असार ३ gautam buddha sandesh	0
लायन्स युथद्धारा सम्मान
२०७४ चैत्र २६ gautam buddha sandesh	0